Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ)
Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
သွေးအတွင်းရှိ အချို့သော ဓါတ်ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏကို လျော့ကျစေခြင်းဖြင့် သွေးပေါင်ကျစေရန် Methyldopa ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ methyldopa သည် သွေးကြောများကို ကျယ်စေပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းနှေးစေရန်နှင့် နှလုံးပို၍ သက်တောင့်သက်သာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည်။ သွေးတိုးရောဂါကို ကုသရန် methyldopa ကို အသုံးပြုသည်။ဤစာရင်းတွင် မပါဝင်သော အခြားအခြေအနေများတွင်လည်း methyldopa ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း အတိအကျသောက်ပါ။ ပိုသောက်ခြင်း၊လျှော့သောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားထားသည့်ကာလထက် ပိုသောက်ခြင်းများ မပြုပါနှင့်။ ဆေးညွှန်းကို အတိအကျလိုက်နာပါ။ ဆေးရည်အသုံးပြုပါက ဆေးပမာဏကို မတိုင်းတာမီ ဆေးပုလင်းကို ကောင်းစွာလှုပ်ပါ။။ ဆေးနှင့်အတူပါလာသည့် ဇွန်းသို့မဟုတ် ခွက်ကို အသုံးပြုပြီး ဆေးပမာဏကို တိုင်းတာပါ(အိမ်သုံးဇွန်းကို မသုံးရပါ)။ တိုင်းတာရန် ပစ္စည်းမရှိပါက ဆေးဆိုင်တွင် တောင်းယူပါ။
သွေးပေါင်မြင့်တက်ခြင်းသည် တခါတရံ မည်သည့် လက္ခဏာမှ ပြလေ့မရှိသဖြင့် သင်ရောဂါသက်သာသွားပြီဟုထင်သည့်တိုင် ဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း ဆက်လက်သုံးစွဲပါ။ သင့်အနေဖြင့် methyldopa ကို တသက်လုံးစွဲသောက်သွားရန် လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မည်။methyldopa သည် အချို့သော ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ၏ ရလာဒ်ကို မူမမှန်ဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သင်methyldopa သုံးစွဲလျက်ရှိကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
သင့်သွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန်တိုင်းနေရန်လိုအပ်သည့်အပြင် methyldopa ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်ပါက သိရှိနိုင်စေရန် အသည်းစစ်ဆေးမှုများကိုလည်း ရံဖန်ရံခါဆိုသလို ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သဖြင့် ဆရာဝန်ချိန်းဆိုသော ရက်ချိန်းများအတိုင်း မပျက်မကွက် သွားရောက်ပါ။ ရုတ်တရက် ဆေးသောက်ရပ်လိုက်ခြင်းသည် ရောဂါအား ပိုဆိုးစေသဖြင့် ဆရာဝန်အား အသိမပေးဘဲ ဆေးသောက်ရပ်လိုက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Methyldopa ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Methyldopa ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Methyldopa ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Methyldopa ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Methyldopa ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
methyldopa ကို မသောက်သုံးမီ
• Methyldopa ၊ sulfites ၊ အခြားဆေးများ သို့မဟုတ် Methyldopa ဆေးပြား သို့မဟုတ် အရည်တွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများနှင့် မတည့်ပါကလည်း ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။metoprolol ဆေးပြားတွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများကို သိရှိနိုင်စေရန် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
• အောက်ပါဆေးများ သုံးစွဲနေပါက ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
a monoamine oxidase (maos) inhibitor such as isocarboxazid (marplan), phenelzine (nardil), selegiline (eldepryl, emsam, zelapar), and tranylcypromine (parnate).
သင့်ဆရာဝန် အနေနှင့် Methyldopa ကို အသုံးပြုစေမည်မဟုတ်ပါ။
• သင်လက်ရှိ သုံးစွဲနေသော ဆေးများ သို့မဟုတ် သုံးစွဲရန် အစီအစဉ်ရှိသည့် ဆေးများ (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေး၊ မိမိဖာသာ သောက်သည့်ဆေး၊ဗီတာမင်အားဆေး၊သဘာဝအားဖြည့်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါဝင်သည်)ကို သင့်ဆရာဝန်အား သေချာစွာ ပြောပြပါ။ အောက်ပါ ဆေးများကို သုံးစွဲနေပါက ဆရာဝန်ကို မမေ့မလျော့ ပြောပြပါ။
haloperidol (haldol), levodopa (in sinemet, in stalevo), lithium (lithobid),tolbutamide , သွေးကျဆေးများ
သင့်ဆရာဝန် အနေဖြင့် ဆေး၏ ပမာဏကို ချိန်ဆရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလည်းပိုမို၍ ဂရုတစိုက် စောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
• သံဓါတ်အားဆေး သို့မဟုတ် သံဓါတ်ပါဝင်သော ဗီတာမင်အားဆေးများကို မသောက်ပါနှင့်။
• သင့်တွင် ကျောက်ကပ်ရောဂါ သို့မဟုတ် (အသည်းရောင်၊အသည်းခြောက်ခြင်းအပါအဝင်) အသည်းရောဂါများရှိပါက ဆရာဝန်ကို ပြောပါ။
• ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် (အထူးသဖြင့် လ အတော်ရင့်နေလျှင်)၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်၊ဆေးသောက်နေရင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
• Methyldopa သည် အသက်ကြီးသူများတွင် အခြားသော သွေးတိုးကျဆေးများကဲ့သို့ စိတ်ချရခြင်း မရှိသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် (အသက် ၆၅နှစ်နှင့်အထက်) Methyldopa ကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။
• သွားနှုတ်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသော ခွဲစိတ်ကုသမှုများ ခံယူရန်ရှိပါက Methyldopa သောက်သုံးလျက်ရှိကြောင်း ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။
• Methyldopa သည် ငိုက်မျဉ်းစေသဖြင့် ဆေးစတင်သောက်ပြီး သို့မဟုတ် ဆေးပမာဏတိုးအပြီး ၄၈နာရီမှ ၇၂နာရီအတွင်း ကားမောင်းခြင်း သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာအကြီးစားများ မောင်းနှင်ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက Methyldopa သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
• အသားအရေ ဝါခြင်း သို့မဟုတ် ဖျော့တော့ခြင်း။ အဖျားတက်ခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊အားနည်းခြင်း။
• အနီစက်များထွက်လာခြင်း၊သွေးခြေဥခြင်း၊ပြင်းထန်စွာ ထုံနာကျဉ်နာဖြစ်ခြင်း၊ကြွက်သား
• အနည်းငယ် လှုပ်ရှားလျှင်ပင် မောခြင်း။
• ခြေလက်များ ဖောယောင်ခြင်း။
• သွေးခြေဥလွယ်ခြင်း၊ (ပါးစပ်၊နှာခေါင်း၊မိန်းမကိုယ်၊စအို စသည်တို့မှ) ပုံမမှန် သွေးယိုစီးခြင်း၊
အရေပြားပေါ်တွင် ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်အစက်များ ပေါ်လာခြင်း။
• အဆစ်အမြစ်များ ရောင်ခြင်း၊နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ကြွက်သားနာခြင်း။
• စိတ်ကျဝေဒနာခံစားရခြင်း၊မူမမှန်သော အတွေးများ ပေါ်လာခြင်း၊အိပ်မက်ဆိုးများ မက်ခြင်း။
• ရင်သားရောင်ခြင်း၊အရည်များ ထွက်ခြင်း။
ဘယ်ဆေးတွေက Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Methyldopa ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်
• Ferrous gluconate (Ferate, Fergon)
• Ferrous sulfate (Feosol, Fer-in- Sol, Feratab, and others)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Methyldopa က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Methyldopa ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
• အသည်းရောဂါ —–> သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ။ ခန္တာကိုယ်ထဲမှ ဆေးစွန့်ပစ်မှုကို နှေးစေသဖြင့် ဆေး၏အာနိသင်မှာ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် များလာနိုင်သည်။
• စိတ်ကျဝေဒနာခံစားဖူးခြင်း —–> methyldopa သည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ် စိတ်ကျဝေဒနာကို ဖြစ်စေသည်။
• pheochromocytoma (ကျောက်ကပ်အနီးရှိ ဂလင်းတခုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကင်ဆာ) —–> methyldopa သည် pheochromocytoma အတွက် ပြုလုပ်သော ဆေးစစ်ချက်များကို ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်သည်။ ထို့အပြင် သွေးပေါင်ကိုလည်း တက်စေသည်။
• ယခင်က methyldopa သောက်ပြီး အသည်းပြဿနာများ ပေါ်လာဖူးလျှင်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
• ကနဦးဆေးပမာဏ ——> ၂၅၀မီလီဂရမ်ကို တနေ့လျှင် ၂ကြိမ်မှ ၃ကြိမ်သောက်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ၂၅၀ – ၅၀၀ မီလီဂရမ်ကို အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် ၆နာရီခြားတခါ (တခါသွင်းလျှင်) နာရီဝက်မှ တနာရီအတွင်း အပြီးသွင်းရသည်။ တနေ့တာအတွက် အများဆုံးပေးနိုင်သော ပမာဏမှာ ၃ဂရမ် ဖြစ်သည်။
• ဆက်လက်သုံးစွဲရမည့်ပမာဏ —–>စုစုပေါင်း ဆေးပမာဏ ၅၀၀ – ၂၀၀၀မီလီဂရမ်ကို နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် လေးကြိမ်အထိခွဲသောက်နိုင်သည်။ တနေ့တာအတွက် အများဆုံးပေးနိုင်သော ပမာဏမှာ ၃ဂရမ် ဖြစ်သည်။
• ၂၅၀ – ၅၀၀ မီလီဂရမ်ကို အကြောသွင်းဆေးအဖြစ် ၆နာရီခြားတခါ (တခါသွင်းလျှင်) နာရီဝက်မှ တနာရီအတွင်း အပြီးသွင်းရသည်။ အများဆုံး ပေးနိုင်သော ပမာဏမှာ ၁ဂရမ်ကို ၆နာရီခြားတခါ သို့မဟုတ် တနေ့လျှင် ၄ဂရမ် ဖြစ်သည်။ သွေးပေါင်ချိန်ကို ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းပြီးချိန်တွင် ပမာဏတူ သောက်ဆေးသို့ပြောင်းရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Methyldopa (မီသိုင်းဒိုပါ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Methyldopa ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေး : ၂၅၀ ၊ ၅၀၀ မီလီဂရမ်။
ထိုးဆေး : 50mg/ml
Methyldopa ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Methyldopa. https://www.drugs.com/mtm/methyldopa.html. Accessed June, 30, 2016.
Methyldopa. http://www.everydayhealth.com/drugs/methyldopa. Accessed June, 30, 2016.
Methyldopa. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/methyldopa- oral-route-intravenous-route/description/drg- 20067791. Accessed June, 30, 2016.